'I-Mandalorian' Ixesha lesibini leNqwelwana yeeNqwelomoya ekunxibelelaneni noJedi - Itv
Eyona Itv 'I-Mandalorian' Ixesha lesibini leNqwelwana yeeNqwelomoya ekunxibelelaneni noJedi
'I-Mandalorian' Ixesha lesibini leNqwelwana yeeNqwelomoya ekunxibelelaneni noJedi
Uqhekeka UMandalorian Ixesha lesibini itreyila.I-Disney +
Inqanawa eyonakeleyo ebhabha kwindlela yeplanethi; umculo owoyikisayo udlala ngasemva. Ndibonise lowo ucinga ukuba intshabalalo ingako, ilizwi liphezulu. Smash usike kwiqhawe lethu.
Yile ndlela uvula ngayo i-trailer kunye ne-mystique ethile.
I-Disney ibambe ixesha elide ukuba iXesha lesi-2 leDisney + uthotho lweflegi UMandalorian izakufika oku kuwa kwaye, ngoku, umsasazi uhambise i-trailer yokuqala kulandelayo.
'Naphi na apho ndiya khona, uya khona.' Bukela i-trailer entsha kraca #Umhlekisi kwaye uqale ukusasaza isizini entsha ye-Okthobha 30, kuphela kwi #DisneyPlus . pic.twitter.com/plfHssS8qG
-Iinkwenkwezi zeMfazwe (@starwars) NgoSeptemba 15, 2020
Kutshanje, sivavanye indlela iSizini 2 ka UMandalorian unako phucula i-rookie run yayo . Iingcebiso zethu eziphambili yayikukuhamba kude kwiindawo ezimbi zeveki kwaye kugxilwe kwingxelo ebhalwe ngokulandelelana eqhutywa kulo lonke ixesha lonyaka. Ngelixa itreyila yetreyila ingayingqinisi loo ndlela, iyabonisa ukuba libanzi elihamba phambili lokuqhuba kweXesha lesi-2.
Kuya kufuneka uphinde uyidibanise nohlobo lwayo, ilizwi eliyalela uDin Djarin (uPedro Pascal). Ngokubalulekileyo, uGeorge Lucas akazange atyhile naluphi na ulwazi malunga nemvelaphi yeentlobo zikaYoda kuyo yonke imbali engama-40 kunye nonyaka Idabi leenkwenkwezi ilungelo lokushishina. Ngoku, uDin kufuneka afumane ilizwe lasekhaya loMntwana kwaye, ngokwenza njalo, akhanyise isahluko esingaqondakaliyo Idabi leenkwenkwezi Lore ethe yanomdla kubalandeli amashumi eminyaka.
Ingoma yeedon eyadlulayo isixelela ngamadabi phakathi kweMandalore Enkulu kunye nomyalelo wabakhafuli ababizwa ngokuba yiJedi, litsho ilizwi.
Kuze kuthi ga, UMandalorian Oku kwenzeka kwisithuba seminyaka emihlanu emva koko Ukubuya kweJedi Ngexesha apho uLuka Skywalker exakekile ezama ukuvuselela iJedi Order, uye wahlala kude neJedi. Njengoko sisazi ukusuka IiDisney Idabi leenkwenkwezi enye inkqubela trilogy , ULuka akaphumelelanga ekuvuseleleni i-Order (enkosi, Kylo Ren). Kodwa oko akuthethi ukuba Nyanzela izidalwa ezibuthathaka ezisakholelwa kwiindlela zakudala azikahlali malunga nomnyele. Kungenxa yokuba usana u-Yoda aluzange luvele nakweyiphi na iimuvi, ezenzeka phantse kwiminyaka engama-25 emva koko UMandalorian , ayithethi ukuba akakabikho. Ukuqhagamshela la manqaku mabini ngexesha iya kuba yinto enomdla ekusebenziseni ukubalisa ibali.
Ixesha le-2 linokuphonononga ingqokelela yeJedi engaphantsi komhlaba kunye noMkhosi wezinto ezibuthathaka ezisasebenza kwindalo iphela. Ukutyhila imvelaphi yeentlobo zeYoda kunye nendawo yazo kwi-galaxy kuya kuba yibhonasi eyongeziweyo. Phosa into esicinga ukuba yiyo kugxilwe ngakumbi ku-Giancarlo Esposito okhohlakeleyo uMoff Gideon Kwaye kubonakala ngathi ixesha lesi-2 linento eninzi engqondweni yalo ngaphandle kwesenzo esimangalisayo kunye namaqanda e-Ista angapheliyo. Ngokudabukisayo, asiyiboni i-Ahsoka Tano kaRosario Dawson apha, kodwa indima yakhe kwiSizini 2 nayo ithembisa ukuphakamisa ingxelo. Lilonke, le yireraji yokuqala eqinileyo ecebisa ubunzulu ngakumbi kunye nokutyhilwa ngeli xesha.
Ixesha lesibini le UMandalorian uza kuqala kwiDisney + ngo-Okthobha u-30.
Ngaba i-HBO iya kuseta iRekhodi yokuReyitha kunye 'neMidlalo yeTrone' yeNkulumbuso ye-8?
Ngaba ufuna ukuphucula ubomi bakho ukuze ube ngumntu olunge ngakumbi? Funda ezi ncwadi
URachel Zoe ukuba aVule iBar eQhelekileyo yokuBetha iBar-Dry eNew York
UTerry Reid Wala ukujoyina uLed Zeppelin-kwaye sisiQalo nje seBali lakhe
loluphi olona kongezelelo lokudala
ifaskoti eblowu vs. hello fresh
Ezona pilisi zingcono uzokuzinciphisa
Ngaba ungumbuzo we-fuckboy
Abathengisi abaphambili be forex kubathengisi bethu
Ipatti smith amahashe i-albhamu